Xarunta Dr. Ismail Jumale ee Xuquuqda Aadamaha oo cambaareysa qaraxii maqaayad ku taal Guriga Hooyooyinka
Dr. ISMAIL JUMALE HUMAN RIGHTS ORGANIZATION (DIJHRO)
Mogadishu, Somalia Ref: dijhro02349/12
Inaa lilaahi wa-inaa ileeyhi raajicuun, Xarunta Dr. Ismaaciil jumaale ee Xuquuqda Aadamaha waxay cambaareyn kulul dusha uga tuureysaa kuwa ka dambeeya xasuuqa waxashnimada ah ee lagu laayey Mas’uuliyiin soomaaliyeed ooy ka mid ahaayeen suxuufiyiinta kal ah; Marxuum Aggaasimihii Idaacada VOD “Raadiyo Xamar” Cabdiraxmaan Yaasiin Cali, Marxuum Liibaan Cali Nuur oo ka tirsanaa Weriyeyaasha iyo TV-ga Radio Muqdisho ahaana madaxii wararka iyo telifishinka qaranka iyo Marxuum Cabdisataar Daahir Sabriye oo isna ahaa madaxii Barnaamijyada telefishinka Qaranka ee radio Muqdisho. Weriyeyaasha ku dhaawacmay ayaa iyana waxaa ka mid ahaa; Cabdullahi Maxmed Cali, Nuure Maxamed Cali iyo Clrisaq Maxamed farax “shiino”,Maxamed Xuseen Gentleman iyo Clkariin Guutaale oo dhamaan ka kala tirsanaa weriyeyaasha ka hawlgala idaacadaha maxaliga ah ee Kulmiye iyo Raadiyo Muqdisho. Mashaqo iyo murugo tiiraanyo leh oo ka dhacday Muqdisho 20-ka September 2012
Xarunta Dr. Ismail Jumale ee Xuquuqda Aadamaha iyadoo la qeybsaneysa dhamaan ehelada, qaraabada iyo asxaabtii ku geeriyootay mashaqadaas ayey tacsi tiiraanyo leh u direysaa dhamaan shacabka soomaaliyeed eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen “Alla u naxariisto Samir iyo iimaan allaha naga wada siiyo”.
Xaruntu waxay u soo jeedineysaa Maamulka Dawladda federaalka soomaaliyeed qeybaheeda qaabilsan sugida amniga shacabka soomaaliyed iney layimaadaan mas’uuliyad haboon ooy ku sugayaan kuna damaanad qaadayaan dhamaan amniga shacabka soomaaliyeed ee muddada dhawrka iyo labaatanka sano ka badan ku soo jiray duruufo adag oo lagu waxyeeleynayo xuquuqahooda aasaasiga ah.
Marwo Maryam Xuseen Awreeye Maxamuud Axmed Xasan